Izophulwa ishoba: Isiqalile imizamo yokuqeda nge-Ithala - Bayede News
Ikusasa layo lifana nele-Ingonyama Trust, limnyama. Itulo labangaphakathi nabangaphandle
Ngalesi sikhathi uHulumeni oholwa yi-African National Congress (ANC) usha amashushu ngesidingo sebhange lombuso, leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi kukhona imizamo yokuqeda ngesikhungo esizinze lapha KwaZulu-Natal i-Ithala Development Finanace Corporation (Ithala). ElaboHlanga lithole ngalo mkhankaso kubantu abehlukene nabasondelene nalokhu okubalwa namalungu ePhalamende kanye nomunye okuHulumeni.
Ngokwale mithombo enxuse ukuba ingadalulwa udaba lwe-Ithala luhlukene kabili yizinkinga zangaphambilini kanye nepolitiki. Kokuthinta izinkinga kubalwa ukuphawula ngebatha ekusebenzeni kwalesi sikhungo okwenziwe nguMnu uKimi Makwetu embikweni wakhe wezi-2016/2017. Lo mbiko wadweba isithombe esingesihle ngokusebenza kwe-Ithala nokungathi nxa kungedlulwa kukho kunqinde inkambo yalo yokuzimela. Umbiko wakhomba izinsolo zenkohlakalo nokuthi i-Ithala lehlulekile ukuletha izitatimende ezichaza ukusetshenziswa kwenkece yonyakamali wezi-2016/2017. Akugcini lapho kodwa okunye akuvezayo ukuthi leli bhange lisabhekene nenkinga yokugcwalisa izikhala ezibalulekile. “Cha le yokuphawula kukaMakwetu ibukeka isilunga njengoba sekukhona izinguquko ezinkulu. Bheka nje sekukhona izikhulu ezifana noPearl Bengu kanti neNkosi uMkhize isiqokwe ukuba ibe nguSihlalo.”
Ngokusho komthombo ukufika kukaNks uBengu kuthe ukuzinzisa njengoba sekukhona nezinto ezibambekayo. Odabeni lwenkohlakalo uthe uNks uBengu usevundulule okuningi njengoba eveze nohlu lwabantu abamisiwe nabaphenywayo.
“Angimazi lo mama ngizwe nje ngaye ngezigemegeme zakhe esebenza noBathabile Dlamini kodwa usuke wenza okungakaze kwenziwe e-Ithala, ukuphenya ngenkohlakalo nokuyinto uMakwetu ayekhala ngayo. Ekwenzeni kwakhe kanjalo uzidalele amazinyo abushelelezi njengoba bekuvele kukhona ukusebenzisana phakathi kwabangaphakathi nangaphandle. Kunomlungu nje wangaphandle (igama lakhe elaboHlanga linalo) engeke ngimangale ukuthi akaneme kanjalo nalabo abangaphakathi ababegila naye imikhuba.”
Omunye umthombo osebenza khona e-Ithala nonolwazi olunzulu uthe impi isazosuka njengoba ozakwabo sebeqalile “ukusebenza abezindaba” lapha esifundazweni nakuzwelonke ukuze kube nenjolozela ebheke e-Ithala ngenhloso yokuphazamisa izinguquko ezikhona. Uthe akulindwe amasonto ezayo nayilapho umkhankaso uzoqina.
“Nina bezindaba anithembekile impela, bengihlale ngizwa. Bheka nje ngoba nginobufakazi bokuthi kukhona abathize kwabezindaba abanikwe imiqulu eminye ehlanekezelwe ukuthi babhale nge-Ithala ikakhulukazi ubuholi obukhona manje. Inhloso wukunyunda bese kubhidlika konke. Kodwa ngoba abantu bakithi Ikakhulukazi osopolitiki bangamalabatheka namagwala bazosaba ukuvikela i-Ithala kule mpi esobala,” kusho lo mthombo.
Libika ngalesi sikhungo ngoLwezi ngowezi-2017 elaboHlanga lakhuluma nalowo okhulumela uVukayibambe esifundazweni, uMnu uMandla Shange nowathi yize lesi sikhungo sinezinselelo kodwa okuhle ukuthi uHulumeni wesifundazwe ulibeke eqhulwini.
Amaphoyisa athi alinde ubufakazi obusha
“Sonke sivumelene ukuthi i-Ithala libhekene nezinkinga zokungaphathwa ngendlela okufanele zilungiswe. Lokho besikusho ngoba yilona bhange esikholelwa ekutheni lizofeza iphupho esinalo njenge-ANCYL lokuba umnotho wezwe uhlomulise naboHlanga. Yingakho nakuHulumeni udaba lwe-Ithala yilo oluseqhulwini ngoba simile ekutheni izimali zikaHulumeni waKwaZulu-Natal aziphume kula mabhange ezibekwa kuwo ziyofakwa e-Ithala. Okunye sifuna zonke izikhulu ezithinteka ekungaphathini ngendlela i-Ithala zijeziswe ukuze siqinisekise ukuthi lisebenza ngobuqotho,” kusho uShange.
ElaboHlanga likhulume noyilungu lePhalalamende nothe udaba lwe-Ithala lungahle licijise imikhonto njengalolo lwe-Ingonyama Trust.
“Eyi i-Ithala liyinkinga. Saqale sathi alivalwe ngenxa yokuthi njenge-Ingonyama Trust salilumbanisa noHulumeni waKwaZulu. Nokho izinguquko zepolitiki ezikhona ezweni kanye nomlando wangempela we-Ithala ususho okunye. Lesi sikhungo sineminyaka engama-60 sabakhona sidala ngisho kuHulumeni waKwaZulu asifani nala mahlathi adla izimali zabantu eVenda (iVBS Mutual Bank). Futhi kungawubuphukuphuku uma uHulumeni esikhundleni sokuthi alungise okonakale amane aqede ngebhange, le ayidingi politiki yamaqembu isobala,” kusho umthombo.
ElaboHlanga linayo imiqulu okuthiwa izodluliselwa kwabezindaba nabanye njengengxenye yomkhankaso wokunyundela i-Ithala nezikhulu ezithize. Kuyiwe ukuyoshicilela Ozul’azayithole besaphenya ubuqiniso bale miqulu.